Suuqa shaqadu waa mid cakiran oo isbedelaya markasta. Sidaas darteed waa muhiim inaad u dhawaato gorgortanka mushaharkaaga adoo hubinaya inaad fursadaha oo dhan dhinac saartay. Tan awgeed, waa inaad raadsataa macluumaad si aad ula jaanqaadi karto suuqaaga, naftaada weydiiso su'aalaha saxda ah ee ku saabsan baahiyahaaga, noqo aragti cad oo ku saabsan qiimahaaga oo aad diyaarsato dood wax ku ool ah. Tababarkan waxaa loogu talagalay adiga oo doonaya inaad wanaajiso gorgortanka mushaharkaaga, haddii aad shaqo raadineyso ama jago, da 'kasta oo ay tahay, heerka waxbarasho ama xirfadeed. Ingrid Pieronne ayaa ku siinaysa talo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee aad ugu diyaar garoobi karto, macluumaadka aad u baahan tahay si aad u hesho sawir cad, iyo sidoo kale xeerarka aasaasiga ah ee gorgortanka mushaharka.
Mushaharkaaga kala hadal Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Ogow sida loo maareeyo waqtigaaga
horeKu wada xiriir jawi dhaqamo badan
socdaAasaaska maareynta mashruuca: Jilayaasha
Tijaabada CyberEnJeux: in ka badan 300 oo arday ayaa loo tababaray ilaalinta internetka iyagoo abuuraya ciyaaro